विवाह र सम्बन्धमा नामहरूको संगतता अंकविज्ञानको सहायताको साथ रुजू गर्न सजिलो छ। प्रत्येक अक्षर पछि संख्यात्मक मान निश्चित छ, र यदि एक व्यक्तिको नामको योगफल अर्कोको योगको तुलनामा हो, तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि संघ कसरी सफल हुनेछ।
नाम द्वारा साझेदार अनुकूलता: गणना विधि
तालिकामा सन्दर्भ गर्दै (तस्विर हेर्नुहोस्), अनुकूलता गणना गर्न, तथ्याङ्कमा नामको अर्थ पत्ता लगाउनुहोस्। नामको सङ्ख्या गणना गर्न, अक्षरहरूको सबै मानहरू लेख्नुहोस् र तिनीहरूलाई थप गर्नुहोस्, र एकल अंकको नतिजा नम्बर प्राप्त गर्न एक-दुई अंकको दुई अंक थप गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि:
सबै संख्याहरू थप्नुहोस्, 62 पाउनुहोस्, नम्बरको भागहरू6+2= 8. यो संयोज्यताको संख्या हो। संगतता फेला पार्नका लागि दोस्रो साझेदारको नाम गणना गर्न आवश्यक छ।
यदि तपाईंले नाम र उपनाममा स्वरहरूको मात्र संख्या थप्नुभयो भने, तपाईं भावनाको संख्या प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, र साझेदारको संख्यासँग पनि मेल खाने।
संख्यात्मकता: नाम द्वारा अनुकूलता
संगतता संख्याको तुलनामा आधारित कसरी संघीय हुनेछ भनेर विचार गर्नुहोस्:
1 र 1 - एक-अर्कालाई रोक्न प्रयासहरू;
1 र2- एक समानुपातिक संघ सम्भव छ;
1 र3- संघ, जो गतिविधि, गतिशीलता, उद्यम द्वारा विशेषता हो;
1 र4- यदि गणना गणना भएको छ भने सफलताको एक मौका हो;
1 र5- विस्फोटक सम्बन्ध: प्रेम, घृणा, र अपमानजनक छैन;
1 र6- एक सफल जीवन एक साथ, एक समानुपातिक संघ;
1 र7- एक पूरक संयोजन, लामो सम्बन्ध;
1 र 8 - यी मानिसहरू प्रेमको अभिव्यक्तिबाट अलग रहन्छन्, र यदि यो दुवै सूट हुन्छ - संघ सफल हुन्छ;
1 र9- एक आदर्श युनियन, बलियो र विश्वसनीय सम्बन्ध;
2 र2- त्यहाँ द्विपक्षीय समझ छैन, सम्बन्ध गहिरो हुन सक्दैन;
2 र3- संघ प्रतिज्ञा गरिएको छ, धेरै लामो हुन सक्छ;
2 र4- यदि यी दुईले पहिलो चरण लिन्छ भने, संघ धेरै बलियो हुनेछ;
2 र5- संघको भावनात्मक योजनामा ​​अस्थिरता;
2 र6- एक सहज र स्थिर संयोजन, कब्रलाई प्रेम;
2 र7- आशा मित्रताको लागि उत्कृष्ट छ, र प्रेम सधैं बाहिर फर्कदैन;
2 र 8 - एक उत्कृष्ट, बलियो गठबन्धन र समझ;
2 र9- क्यारेक्टरको फरक फरक कारण समस्याग्रस्त सम्बन्ध;
3 र3- संघ राम्रो छ, यदि यसले दुवैको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दैन;
3 र4- यदि भावनाहरू छन् भने युनियन बलियो हुनेछ;
3 र5- उत्कृष्ट संयोजन;
3 र6बलियो र गहिरो सम्बन्ध;
3 र7- एक सफल संघको सानो मौका;
3 र 8 - लगातार संघर्ष र झन्डाहरू;
3 र9- साधारण चासोहरूले यस जोडीलाई धेरै लामो बनाउनेछ;
दुई रूढिवादीहरूको4र4बलियो र स्थिर संघ;
4 र5- जोडीमा गलतफ्लुन्टिङ;
4 र6- एक खुशी र लामो युनियन;
4 र7- अत्यावश्यक छैन तर लामो र स्थिर सम्बन्ध;
4 र 8 सफलतापूर्वक, यदि जोडी मा शक्ति को लागि कुनै संघर्ष छैन;
4 र9- पारस्परिक आकर्षण र विकास सम्बन्धी सम्बन्धको लागि विकल्पहरूको एक समुद्र;
5 र5- दुई समान आत्माहरूको एक विश्वसनीय संघ;
5 र6- संघ अस्थिर छ, तर धेरै सम्भव छ;
5 र7- पात्रहरूको विपरीत र समुदायको समुदाय;
5 र 8 - आजादीका लागि तिनीहरूको इच्छा मुख्य समस्या हो;
5 र9- सानो परिवारको समस्यासँग उत्कृष्ट गठबन्धन;
6 र6- राम्रो सम्भावनाहरू, तर भावनाहरू अल्पकालिक हुन सक्छ;
6 र7- अनिश्चितता, विभिन्न सम्बन्धहरू सम्भव छन्;
6 र 8 - एक भौतिकवादी र एक आदर्शवादी, तर सम्बन्ध सम्भव छ;
6 र9- एक निरन्तर संयोजन;
7 र7- दुवै अकेलापनको लागि प्रयास गर्दै छन्, सम्भावनाहरू किन धमिलो हुन्छन्।
7 र 8 - धेरै असफल संयोजन, पात्रहरूको असंगति;
7 र9- रोमांसको लागि सफल, तर जीवन संयोजनको लागि असफल;
8 र 8 - दुवै आज्ञा गर्न प्रयास गर्नुहोस्;
8 र9- व्यवसायिक संचारको लागि उपयुक्त छ;
9 र9- युनियन सफल र असफल हुन सक्छ।
गुप्त नामको अनुकूलता सिक्न, मानिन कि यो एक मात्र सम्भव र अनिवार्य परिदृश्य हो। नामहरू मात्र सम्भावित कठिनाइहरू र अवसरहरू संकेत गर्दछ, र तपाईं तिनीहरूलाई जान्न सक्नुहुन्छ, तपाईंको भाग्य परिवर्तन गर्नुहोस्।
साथीहरूसँग कसरी कुराकानी गर्ने?
नोस्ट्रादामस भन्दा बलियो: अल्बर्टको भविष्यको भविष्यको बारेमा भविष्यवाणी पहिले नै आउँदैछ!
उत्तरी देशको संग्रहालय
कसरी बीउ संग स्ट्रबबेरी रोपण गर्ने?
कसरी एक दाँतको ब्रश छनौट गर्ने?
मासु संग मटर सूप पकाउने कसरी?
आदम लेविन र बहाती प्रन्सलले घरबाट छुटेका थिए, केवल पाँच महिना पहिले किन्नुभयो
इटालीमा कर मुक्त नि: शुल्क
Uterine bleeding संग हेमोस्टेटिक ड्रग्स
तुला क्षेत्र मा चीन टाउन
हनी उपचारको लागि व्यञ्जन
बीउ र सेम संग सलाद
तिलले कसरी बढ्छ?
स्मोक्ड पनीरसँग सलाद